မနကေ့ အရမျးပြျောရှငျတကျကွှနပွေီး ဒီနမှေ့ာ စိတျဓါတျကတြာမြိူး ဖွဈဖူးပါသလား။
အလုပျတဈခုမလုပျခငျမှာအားအငျအပွညျ့နဲ့ တကျကွှနပွေီး လုပျနတေုနျး အခကျအခဲတဈခုခုနဲ့ ကွုံတှလေို့ကျလို့ စိတျဓါတျကပြွီး မလုပျခငျြတဲ့အထိဖွဈဖူးပါသလား။
ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူ၊ ခငျသူတှနေဲ့အဆငျမပွဖွေဈပွီးတဈယောကျတညျး အားငယျဝမျးနညျးနတောမြိူးဖွဈဖူးပါသလား။
လူတိုငျးလူတိုငျးဟာ အလုပျမလုပျခငျြမကိုငျခငျြဖွဈပွီး စိတျဓါတျကတြာတှေ၊စိတျအားငယျတာတှေ စတဲ့ စိတျနမေကောငျးဖွဈတာမြိူးတှကေို ဘဝမှာအနညျးဆုံးတဈကွိမျတဈခါတော့ကွုံဖူးကွပါတယျ။
သငျ့မှာဒီလိုမြိူးစိတျနမေကောငျး ဖွဈနပွေီဆိုရငျပထမဦးဆုံးအနနေဲ့လူတိုငျးကပြျောရှငျနပွေီး ဒီလိုမြိူးခံစားဖူးတာသငျတဈယောကျတညျးလို့မထငျလိုကျပါနဲ့။အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့အတိုငျး လူတိုငျးလူတိုငျး စိတျနမေကောငျးဖွဈဖူးကွတယျဆိုတာကိုသတိရပါ။
ဒီလိုစိတျနမေကောငျးဖွဈတာကိုကုသနိုငျတာကလညျးကိုယျကိုယျတိုငျပဲဖွဈတယျဆိုတာကိုလညျး သတိပွုပါ။ကိုယျ့ကိုယျကိုယျစိတျနမေကော ငျးဖွဈနတေယျ ဆိုတာကို သိပွီဆိုရငျဒုတိယ အဆငျ့အနနေဲ့ ဘာကွောငျ့ဖွဈတာလဲဆိုတာကိုစဉျးစားပါ။
ကနျြးမာရေးမကောငျးလုိ့လား။ ဝငျငှနေညျးသှားလို့လား။ အလုပျမှာ အထကျလူကွီးနဲ့အဆငျမပွလေို့လား။ခဈြသူနဲ့အဆငျမပွလေို့လား။စသညျအားဖွငျ့ စိတျနမေကောငျးဖွဈရတဲ့အကွောငျးအရငျး ဇဈမွဈကို သိအောငျအရငျ ရှာပါ။
အဓိကဇဈမွဈကိုသိပွီဆိုရငျဘယျလိုကုသရမလဲဆိုတာကို တတိယအဆငျ့အနနေဲ့ စဉျးစားရပါမယျ။စိတျနမေကောငျးဖွဈရတဲ့အဓိကအကွောငျးအရငျးက ကိုယျ့မှာရှိတဲ့မကောငျးတဲ့အခကျြတှကေိုပဲ မွငျလာတတျခွငျးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။လူတိုငျးမှာအဆိုးနဲ့အကောငျး ဒှနျတှဲနတေတျပါတယျ။
စိတျနမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ အခြိနျမှာလူတိုငျးဟာ အကောငျးထကျစာရငျအဆိုးကိုသာ ပိုမွငျပွီး အဆိုးတှကေိုပဲပိုတှေးတတျကွပွီးကိုယျလိုခငျြ၊ရောကျခငျြတဲ့နရောတဈခုကို ပြောကျသှားတတျကွပါတယျ။
ဥပမာ - ကုနျစုံဆိုငျပိုငျရှငျတဈယောကျဆိုငျရဲ့ရောငျးအား(ဝါ)ဝငျငှနေညျးသှားလို့ စိတျဓါတျကတြယျဆိုပါစို့ဝငျငှကေဘာကွောငျ့နညျးသှားတာလဲ။သူ့ဆိုငျကိုဈေးဝယျသူတှဘောကွောငျ့မလာတော့တာလဲဆိုတာကိုအရငျစဉျးစားပါ။
- မတနျတဆဈေးတှတေငျထားမိလို့လား။ စတဲ့အကွောငျးအရငျးဇဈမွဈကိုအရငျရှာပါ။
ပွောဆိုဆကျဆံရေး အဆငျမပွလေို့ဆိုတဲ့အကွောငျးအရငျးကိုရှာတှပွေီ့ဆိုရငျတော့ဈေးဝယျသူလာရငျ အပွုံးလေးနဲ့ကွိုဆိုတာမြိူး၊ ကြေးဇူးတငျစကားပွောတာမြိူးစတဲ့ဆိုငျရဲ့ ရောငျးအားကိုပွနျလညျတိုးတကျစနေိုငျတဲ့နညျးစနဈတှကေိုစဉျးစားပွီး လိုကျနာကငျြ့သုံးပါ။ရောငျးအားကလြို့ဆိုပွီးစိတျဓါတျကကြာအရကျသောကျပွီးတခွား အပြျောအပါးတှေ လိုကျစားနမေယျဆိုရငျ ငှကေုနျကွေးကပြိုမြားကာပိုပွီး စိတျနမေကောငျး ဖွဈမှာပါ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ စိတျနမေကောငျးဖွဈပွီဆိုရငျဘာကွောငျ့ဖွဈတာလဲ၊ကောငျးကောငျးမှနျတဲ့နညျးလမျးနဲ့ဘယျလိုမြိူးကုစားရမလဲဆိုတာကစဉျးစားပွီးကိုယျခမြှတျထားတဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့နညျးလမျးတှအေတိုငျး လိုကျနာကငျြ့သုံးရငျးနဲ့ပြျောရှငျတကျကွှသူမြားဖွဈနိုငျကွပါစဟေု ဆန်ဒပွုရငျး……….
Credit : Tr. Nway Zaw Oo
မနေ့က အရမ်းပျော်ရွှင်တက်ကြွနေပြီး ဒီနေ့ မှာ စိတ်ဓါတ်ကျတာမျိူး ဖြစ်ဖူးပါသလား။
အလုပ်တစ်ခုမလုပ်ခင်မှာအားအင်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွနေပြီး လုပ်နေတုန်း အခက်အခဲတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့ လိုက်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး မလုပ်ချင်တဲ့အထိဖြစ်ဖူးပါသလား။
ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူ၊ ခင်သူတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတစ်ယောက်တည်း အားငယ်ဝမ်းနည်းနေတာမျိူးဖြစ်ဖူးပါသလား။
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အလုပ်မလုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ၊စိတ်အားငယ်တာတွေ စတဲ့ စိတ်နေမကောင်းဖြစ်တာမျိူးတွေကို ဘ၀မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ကြုံဖူးကြပါတယ်။
သင့်မှာဒီလိုမျိူးစိတ်နေမကောင်း ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လူတိုင်းကပျော်ရွှင်နေပြီး ဒီလိုမျိူးခံစားဖူးတာသင်တစ်ယောက်တည်းလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း လူတိုင်းလူတိုင်း စိတ်နေမကောင်းဖြစ်ဖူးကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။
ဒီလိုစိတ်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုကုသနိုင်တာကလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်နေမကော င်းဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို သိပြီဆိုရင်ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။
ကျန်းမာရေးမကောင်းလုိ့လား။ ၀င်ငွေနည်းသွားလို့လား။ အလုပ်မှာ အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေလို့ လား။ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေလို့ လား။စသည်အားဖြင့် စိတ်နေမကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်း ဇစ်မြစ်ကို သိအောင်အရင် ရှာပါ။
အဓိကဇစ်မြစ်ကိုသိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတာကို တတိယအဆင့်အနေနဲ့ စဉ်းစားရပါမယ်။စိတ်နေမကောင်းဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းက ကိုယ့်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပဲ မြင်လာတတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းမှာအဆိုးနဲ့အကောင်း ဒွန်တွဲနေတတ်ပါတယ်။
စိတ်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာလူတိုင်းဟာ အကောင်းထက်စာရင်အဆိုးကိုသာ ပိုမြင်ပြီး အဆိုးတွေကိုပဲပိုတွေးတတ်ကြပြီးကိုယ်လိုချင်၊ရောက်ချင်တဲ့နေရာတစ်ခုကို ပျောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ - ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဆိုင်ရဲ့ ရောင်းအား(၀ါ)၀င်ငွေနည်းသွားလို့စိတ်ဓါတ်ကျတယ်ဆိုပါစို့ဝင်ငွေကဘာကြောင့်နည်းသွားတာလဲ။သူ့ဆိုင်ကိုဈေးဝယ်သူတွေဘာကြောင့်မလာတော့တာလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားပါ။
- မတန်တဆဈေးတွေတင်ထားမိလို့ လား။ စတဲ့အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်ကိုအရင်ရှာပါ။
ပြောဆိုဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုရှာတွေ့ ပြီဆိုရင်တော့ဈေးဝယ်သူလာရင် အပြုံးလေးနဲ့ကြိုဆိုတာမျိူး၊ ကျေးဇူးတင်စကားပြောတာမျိူးစတဲ့ဆိုင်ရဲ့  ရောင်းအားကိုပြန်လည်တိုးတက်စေနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေကိုစဉ်းစားပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးပါ။ရောင်းအားကျလို့ ဆိုပြီးစိတ်ဓါတ်ကျကာအရက်သောက်ပြီးတခြား အပျော်အပါးတွေ လိုက်စားနေမယ်ဆိုရင် ငွေကုန်ကြေးကျပိုများကာပိုပြီး စိတ်နေမကောင်း ဖြစ်မှာပါ။
ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်နေမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ကောင်းကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုမျိူးကုစားရမလဲဆိုတာကစဉ်းစားပြီးကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်တက်ကြွသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုရင်း……….